Caalamka Wax Akhriska | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waxaan jecelahay inan idin la wadaago mowduuc dulucdiisu tahay ‘wax akhrisku waa waxa qudha ee ku gaadhsiin kara horumar iyo halka aad rabto.’’Mowduucan aad buu u baladhan yahay maqaal kobanna lagagama hadli karo marka si kooban oo qodobaysan ban uga hadli doona insha allaah hadaba,
Waa maxay aqrisku?
Akhrisku waa quudinta, kobcinta, kor uqadida, qimaynta maskaxda. Sida jidhku ugu bahan yahay cunto iyo cabid ayey maskaxduna waxay ugu bahan tahay akhris. Dadka wax akhriya waxa ay ka cimri dheer yihin dadka kale waxay taariikh iyo fikrado ka hayaan dadkii boqolaalsano ka horeyay waxayna taariikh iyo fikrado fiican uga tagaan dadka ka danbeya ayagoo usii reebaya qoraal fiican.
Ahmiyada uu leeyahay wax akhrisku.
Waxaa jirta xikmad odhanaysa akhriyaha maanta waa hoggaamiyaha beri.’’ Akhrisku waa mid ka mid ah hilinnada aqoonta loogu arooro. Waa quudka maskaxda. Waa dhex mushaaxa caqliyada dadka, waana nolol kale oo dheeraad ah. Bulshooyinka aayahooda aqooneed iyo horumarba waxa laga dheehdaa, sida ay akhriska ugu kala horreeyaan, qofkana ogaalkiisu wuxu gaadhsiisan yahay kalba inta akhriskiisu yahay.
Wax akhrinta waxaa lagu tiriyaa in ay tahay hab kamid ah hababka ugu fiican ee insaanku ku kasbado wax badan oo kamid ah aqoonta iyo fikradaha, waxa ayna gaarsiisaa in insaanku noqdo mid horumarsan dhan walba oo noloshiisa kamid ah, cilmi ahaan cafimaad ahaan, dhaqaala ahaan, bulsha ahaan, siyaasad ahaan, dhaqan ahaan, waxa ayna u furtaaa dariiq iyo maskax balaadhan oo ay adkeed gaadhideedu, waxa la sheegaa maktabadii ugu horaysay ee faraacinadii hore in albaabkeeda hore ay ku qoreen,
“Halkaan waa quudka nafta, iyo daawada caqliyada”
Halka sidoo kale lagu tiriyo wax aqrinta ilaha ugu badan ee ay kasoo burqadaan cilmiga iyo aqoontu. Sido kale akhrisku waa qayb ka mida qaybaha muhiimka ah ee aynu ku kasbano fahan, cilmi, iyo aragti dheer oo aynu u yeelano waxkasta oo aynu akhrino, wax akhrisku waa wada guusha kaas oo ku tusaya wadooyin hore oo lagu guulaystay, waxaanu ku tusayaa wadada saxda ah ee nolosha.
Wax akhrisku waxa uu ku siinayaa farxad, madadaalo, iyo wehel wanaagsan oo aad naftaada wax la wadagtid. Buug kasta oo aad akhridaa wuxuu kobcinayaa maskaxadaada, wuxuna ku siinayaa aqoon aad noloshaada ku noolaatid waa haddii buuggaasi yahay buug sax ah oo cilmi iyo caqliba ku dhan yihiin.
Buug kasta oo aad akhridaa wuxu ku siinayaa aragti faa’ido leh, wuxuuna ku siinayaa maskax balaadhin, markasta oo aad wax akhrididna waa markasta oo maskaxdaadu balaadhato, markasta oo aanad wax akhriyina waa markasta oo maskaxdaadu hoos u socoto. Buuggaagtu waa kala duwan yihiin qaar saamayn ayay naftaada ku yeelan karaan, qaarna waxa ay ku noqon karaan farxad iyo horumar markaa iska jir marka aad akhrinaysid buugta negative ah.
Akhrisku bulshooyinka feejigan, ee horumaray mustaqbalkana rajo ka qaba, wuxu uga dhiganyahay, baahiyaha lagama maarmaanka ah, sida: cunista iyo cabista, ma qofbaa noolaan kara cunto iyo cabbis la’aan? Sidaas oo kale akhris la’aantuna waa xaalad taas la mid ah.
Hadaba bulshadeenu halkay ka taagan tahay wax akhriska?
Akhrisku waa quudinta, kobcinta, kor uqadida, qimaynta maskaxda.
Bulshadeennu waxay ka mid tahay, dadyowga aan dhaadanayn qiimaha aqoonta, aqoonyahan iyo caamaba arrintaa waa laga siman yahay, iyadoo ay sidaa tahay ayaa maantana farsamooyinka casriga ah, iyo warbaahintu hoos u sii dhigtay akhriskii, waxase jira dad kooban oo akhriska ku howlan, karaankoodna dadaalaya, iyagoo aan haysani waxyaabihii akhriska ku badhitaari lahaa.
Ma jiraan maktabado caam ah oo wax lagu akhristaa, mana jiraan dukaanno buuggaag tayo leh iibiyaa, waxa kale oo yar ama aan jirinba, naadiyo akhris iyo xarumo aqoon-baadhiseed oo tayo leh.
Arinkaana waxa lagaga bixi kara in bulshada loo sameeyo wacyi galin joogto ah lana fahan siiyo ahmiyada uu leeyahay wax akhrisku, loona sam eeyo xarumo ama goobo wax lagu akhristo tababarana lagu siiyo, sido kale waxa muhiim ah in la dhiiri galiyo lana abaal mariyo dadka tirada yar ee ku hawlan kana shaqaynaaya wax akhriska. Wax aqrintu waxa ay leedahay ahmiyad aad u balladhan oo maqaal iyo labatoona lagu soo kobi karin.
Waxyaabaha ka caawin kara akhriska amaba kugu hagi kara akhris faaido leh.
Qorshe akhris: Mar walba ha ku diyaarsanaadaan waxa aad akhriyeyso, qoraalkaaguna ha yeesho u jeedo qorshahaaga waxa aad ka dhigi karaysa hadba qaabka aad jeceshahay sida todobaadle, bille, ama sanadle.
Maktabad samayso: qof kastoo akhriska u heellani, buugaagta waa inuu kaydsadaa, dhaqaalihiisana in macquul ah uga qoondeeyaa buug iibsiga.
Akhris wadaag: horaa loo yidhi: far keli ahi fool ma dhaqdo. Akhriste kasta waxa la gudboon inuu yeesho cid uu wax la akhristo, laba qof ama wax ka badan, oo hadba wixii ay akhriyaan falanqeeya, kana dooda.
Aqoonta gudbi: Aqoonta aad akhriday haddii waxba looga aayi waayo, dadkuna ka qatanaadaan, haan gun la’ baad tahay, markasta ku dadaal inaad wixii kaaga bidhaama dadka la wadaagto. Qoraal baad ku gudbin kartaa, hadal baad ku gudbin kartaa, dood baad ku gudbin kartaa, adigana tababar bay ku noqonaysa iyo in ay macluumadki sugmaan.Wax yaabaha kaa caawin kara wax akhriska way badan yihin, lakin inahaas baan ku soo koobayna.
Islaamka iyo wax akhriska
Diinta islaamku waxaa ay muhiimad weyn siisaa aqoonta iyo kasbashadeeda. Aayadii ugu horeysey ee quraanka kariimka, waxaa ay ahayd mid rasuulkeena (NNKH) lagu amray inuu wax akhriyo. Ilaahay subxaanu watacaalaa waxaa uu yidhi. “ akhri” adigoo kaashanaaya magaca rabbigga ku abuuray. ( suurada Iqra ama calaq aayada 1.aad).
Ilaahay waxaa kale oo Rasuulka (NNKH) ku amray inuu rabbiggiis ka baryo in aqoontiisu u korodho. Raadinta aqoontu waa waajib, waana qodob meel sare kaga xusan diinta islaamka.
Faa’idooyinka wax akhriska iyo Waxyaalaha laga dhaxlo akhriska.
Akhriska waxa aad ka helaysa Cilmi korodhsi Waxaa kordhaysa caqligaaga, maskaxadaada, aragtidaada iyo wayo arignima buuxdana oo aad ka helaysid aqriska. Waxaad kaloo ka helaysaa fikrado cusub sida noloshii dadkii hore ama erayo cusub iyo inaad wax kabaratid dabecadaha iyo nolosha dadka.
Akhriska waxa aad ka helaysaa warbixino cusub, waddooyin cusub oo aad wax ku xalin karto waddooyin badan oo aad guul ku gaadhi karto.
Akhrisku waxa uu kor u qaada horumarka naftaada sida kalsoonida, samaynta qorshayaal cusub iyo nidaaminta noloshaada.
Akhrisku waxaa laga helaa khibrad iyo aqoon fara badan taas oo ay kula wadaagayaan dadka qoray hadba buugga aad akhriyayso.
Akhriska waxa laga bartaa wax ikhtiraacidda, dabagalka iyo ka libkeenidda wax kasta oo aad danaynayso.
Akhrisku waxa uu kor u qaadaa fahanka maskaxda. Waxa uu ku siiyaa qaabab aanad hore u aqoon oo aad wax ku fahmi karto ama waxa uu ku fahansiiyaa waxyaabo aanad fahansanayn marka hore.
Akhrisku waxa uu kaa caawinaya ina aad noqoto qof la jaan qaadaya caalamka awoodna u leh inu wax ku soo kordhiyo, sido kale Akhrisku waxa uu ku barayaa xasiloonida, deggenaanta iyo u fiirsashada ka hor inta aanad ku dhaqaaqin waxyaabo badan.
Waxaan kusoo gababaynayaa in aduunyada lagu kala hormarey aqriska iyo inta ay dawlad walbaba lacag ku bixiso akhriska iyo wax barashada. Ummad walbaana hadba intay wax akhrido ayey horumarta. Qof walbaana inta uu wax akhriyo ayuu ogaalkiisu leeg yahay.
Waxaana muhiim ah inaynu badino wax akhriska marka aynu wax akhrino ayeynu waxna qori karna mana kala marman akhriska iyo qoraalku. Hadii aynaan wax akhrin waxna qorin ma gaari doono wax horumar ah. Gaar ahaan casrigan aynu noolnahay oo lagu tiriyo casrigii cilmiga.
Tixraacyo way jiraan.
Tags: Caalamka Wax Akhriska
Next post Maxaad Kala Socotaa Hadimada Qaadka Iyo Cudurka Korona Fayras?
Previous post Sheekada Filimka Soomaalidu Jilayaan ee Caalamiga Noqday